सुत्केरी महिला कति समयमा पुरानै अवस्थामा आउछिन्-स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. अनुपमा शर्मा - Internet Khabar
Home Health सुत्केरी महिला कति समयमा पुरानै अवस्थामा आउछिन्-स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. अनुपमा शर्मा
सुत्केरी महिला कति समयमा पुरानै अवस्थामा आउछिन्-स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. अनुपमा शर्मा
सामान्यतया बच्चा जन्मिएपछि ६ हप्तासम्मको अवधि सुत्केरी महिलाका लागि निकै संवेदनशील मानिन्छ । यो समयमा अभिभावकले बच्चा र सुत्केरी महिलाको निकै ख्याल गर्नुपर्छ ।
डाक्टरका अनुसार यस अवधिमा गह्रौँ भारी उचाल्नु हुँदैन, छिटो–छिटो हिँड्नु हुँदैन । साथै सुत्केरी महिलाले प्रशस्त मात्रामा आराम गर्नुपर्छ । बच्चा जन्मिएसँगै सुत्केरी महिलाले यस्ता कुरामा ध्यान दिए बच्चा र आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ ।
हाम्रो समाजमा सुत्केरी महिला ४५ दिन पछि सबै काम गर्न सक्छिन् भन्ने मान्यता रहदैँ आएको छ । यस विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रमा लामो समयसम्म काम गर्दै आउनु भएका स्त्रिरोग विशेषज्ञ डा. अनुपमा शर्मासँग सुत्केरी महिलाको कसरी स्याहार र हेरविचार गर्ने ?
सुत्केरी महिला कति समयमा पुरानै अवस्थामा आउछिन् र सुत्केरी भएको कति समयपछि यौ*न सम्पर्क राख्नु उचित हुन्छ भन्ने विषयमा डाक्टर साथी युट्युव च्यानलले विशेष अन्तरवार्ता लिएको छ । आशा छ यस पटको भिडियो पनि दर्शक महानुभावले मनपराउनुहुने नै छ ।
Previous articleमाघेसङ्क्रान्तिबाट राष्ट्रिय एकता थप सुदृढ पार्न मद्दत पुगोस्ः राष्ट्रपति
Next articleआगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान समाचार, चिसोबाट बच्ने उपाय अपनाउनु हुन अनुरोध